သခွါးခင်းစောင့်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်သူတော်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် အဖြစ်..။ - APANNPYAY
Home / ရယ်စရာများ / သခွါးခင်းစောင့်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်သူတော်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် အဖြစ်..။
သခွါးခင်းစောင့်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်သူတော်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် အဖြစ်..။
Apann Pyay 8:14 PM ရယ်စရာများ Edit
ကျွန်တော်တောသားတစ်ယောက်ပါ... ကျွန်တော့်မှာ ချစ်သူရှိတယ်... အဲ့ဒီချစ်သူကလည်း ကျွန်တော်တို့ရွာ မြောက်ဘက်ရွာကဆိုတော့ တောသူလေးပဲပေါ့...
သူနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ...။ စပြောရမယ်ဆိုရင် သခွါးသီးကစတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့..။ အခုရက်ပိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သခွါးသီးတွေ သောင်းကျန်းနေတာ တွေ့လို့ သတိရပြီး ပြောချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ပါ...။
ဒီလိုပါ.. တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့် အမေက မြောက်ဘက်ရွာကို သွားပြီး ငပိဖိုးရစရာ ရှိတဲ့ အိမ်သုံးအိမ်ကို အကြွေးသွားတောင်းခိုင်းတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း မသွားချင်သွားချင် နဲ့ အမေ့ကိုကြောက်တော့ သွားလိုက်ရတာပေါ့...။
ကျွန်တော်သွားတဲ့ လမ်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းလောက်မှာ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ သခွါးခင်းတစ်ခင်း တွေ့ပါလေရော.... ကျွန်တော်ကလည်း သခွါးသီးဆိုရင် အလွှတ်ကြိုက်သပေါ့...
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စားချင်စိတ်ဇောနဲ့ သခွါးခင်းရှိရာ ဘက်ကို ဦးတည်ပြီး သွားမယ်အလုပ် တဲလေးတစ်လုံးကို သတိထားမိလေရော... လှမ်းကြည့်တော့လည်း လူကမတွေ့ဘူး.. တဲထဲမှာတော့ လူရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး... သခွါးခင်းပိုင်ရှင်စီကို သခွါးသီးတစ်လုံး တောင်စားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တဲရှိရာကိုခပ်သုတ်သုတ် သွားခဲ့တာပေါ့...
တဲနားလည်းရောက်ရော ခြေသံကြားလို့ထင်တယ်.. တဲထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပျာသည့်ပျာယာ ထွက်လာတယ်.. သူ့ကိုကြည့်တော့ ကျွန်တော် တဲနားသွားခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တောင် ပျောက်သွားတယ်... သူက သိပ်လှတာကိုးဗျ...။
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်က လက်ရဲ ဇက်ရဲဆိုတော့ ဘာရမလဲ... သခွါးသီးတောင်းမစားတော့ပဲ... ရည်းစားစကားပြောတော့တာပေါ့...။ ကောင်မလေးက အစတော့ ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလိုနဲ့ပေါ့...။ ကျွန်တော်ကလည်း စကားကြွယ်တယ်... အထာနပ်ပြီးသား... ပါကလည်း ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆိုတော့ ကောင်မလေး အဲ့နေရာမှာပဲ... ကျွန်တော်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်သွားကြတာပေါ့...။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အခုမှ အရေးကြီးတာဗျ... ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူဖြစ်ကတည်းက အခုချိန်ထိ သူကလည်းကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်... ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို ချစ်တယ်....။
ဒါပေမယ့်... ။ အခုရက်ပိုင်း ကျွန်တော် ပေါက်ကရတွေ တွေးတွေးနေမိနေတယ်...။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာကလည်း သခွါးသီးတွေသောင်းကျန်းနေတယ်...။ ?????????????????????????????????????????? အဲ့လိုပေါ့...။ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးနော်...။ ကျွန်တော် အစိုးရိမ်လွန်နေတာဖြစ်မှာပါနော....။
ကျွန်တော့် ချစ်သူကောင်မလေးကလည်း အခုထိ သခွါးခင်းစောင့်နေသေးတယ်...။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ခုခုပြောချင်တာများ ရှိရင်... ကွန်မန့်ကနေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခဲ့ကြပါလားဗျာ...။
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ခုနေသလိုပဲ.....။
အပန်းပြေ ပျော်စရာ အဖြစ် အပျင်းပြေသဘောဖြင့် ရေးမိရေးရာ ရေးမိခြင်းပါ..။
မည်သည့်စာမျက်တွင် မဆို (Credit to ApannPyay) ဖြင့် ကူယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်..။
ကြှနျတျောတောသားတဈယောကျပါ... ကြှနျတေျာ့မှာ ခဈြသူရှိတယျ... အဲ့ဒီခဈြသူကလညျး ကြှနျတျောတို့ရှာ မွောကျဘကျရှာကဆိုတော့ တောသူလေးပဲပေါ့...
သူနဲ့ ကြှနျတျော ခဈြသူဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးလေးပါ...။ စပွောရမယျဆိုရငျ သခှါးသီးကစတဲ့ ဇာတျလမျးလေးပေါ့..။ အခုရကျပိုငျး အှနျလိုငျးပျေါမှာ သခှါးသီးတှေ သောငျးကနျြးနတော တှလေို့ သတိရပွီး ပွောခငျြစိတျပေါကျလာလို့ပါ...။
ဒီလိုပါ.. တဈနေ့ ကြှနျတေျာ့ကို ကြှနျတေျာ့ အမကေ မွောကျဘကျရှာကို သှားပွီး ငပိဖိုးရစရာ ရှိတဲ့ အိမျသုံးအိမျကို အကွှေးသှားတောငျးခိုငျးတယျ..။ ကြှနျတျောလညျး မသှားခငျြသှားခငျြ နဲ့ အမကေို့ကွောကျတော့ သှားလိုကျရတာပေါ့...။
ကြှနျတျောသှားတဲ့ လမျးနဲ့ မလှမျးမကမျးလောကျမှာ စိမျးစိမျးစိုစိုနဲ့ သခှါးခငျးတဈခငျး တှပေ့ါလရေော.... ကြှနျတျောကလညျး သခှါးသီးဆိုရငျ အလှတျကွိုကျသပေါ့...
ဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျး စားခငျြစိတျဇောနဲ့ သခှါးခငျးရှိရာ ဘကျကို ဦးတညျပွီး သှားမယျအလုပျ တဲလေးတဈလုံးကို သတိထားမိလရေော... လှမျးကွညျ့တော့လညျး လူကမတှဘေူ့း.. တဲထဲမှာတော့ လူရှိမယျထငျတယျဆိုပွီး... သခှါးခငျးပိုငျရှငျစီကို သခှါးသီးတဈလုံး တောငျစားမယျဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ တဲရှိရာကိုခပျသုတျသုတျ သှားခဲ့တာပေါ့...
တဲနားလညျးရောကျရော ခွသေံကွားလို့ထငျတယျ.. တဲထဲက ကောငျမလေးတဈယောကျ ပြာသညျ့ပြာယာ ထှကျလာတယျ.. သူ့ကိုကွညျ့တော့ ကြှနျတျော တဲနားသှားခဲ့တဲ့ ရညျရှယျခကျြတောငျ ပြောကျသှားတယျ... သူက သိပျလှတာကိုးဗြ...။
ဒါနဲ့ပဲ ကြှနျတျောက လကျရဲ ဇကျရဲဆိုတော့ ဘာရမလဲ... သခှါးသီးတောငျးမစားတော့ပဲ... ရညျးစားစကားပွောတော့တာပေါ့...။ ကောငျမလေးက အစတော့ ရှကျသလိုလို ကွောကျသလိုလိုနဲ့ပေါ့...။ ကြှနျတျောကလညျး စကားကွှယျတယျ... အထာနပျပွီးသား... ပါကလညျး ခပျဖွောငျ့ဖွောငျ့ဆိုတော့ ကောငျမလေး အဲ့နရောမှာပဲ... ကြှနျတျောနဲ့ ခဈြသူဖွဈသှားကွတာပေါ့...။
ကြှနျတျောပွောခငျြတာက အခုမှ အရေးကွီးတာဗြ... ကြှနျတျောတို့ ခဈြသူဖွဈကတညျးက အခုခြိနျထိ သူကလညျးကြှနျတေျာ့ကို ခဈြတယျ... ကြှနျတျောကလညျး သူ့ကို ခဈြတယျ....။
ဒါပမေယျ့... ။ အခုရကျပိုငျး ကြှနျတျော ပေါကျကရတှေ တှေးတှေးနမေိနတေယျ...။ အှနျလိုငျးပျေါမှာကလညျး သခှါးသီးတှသေောငျးကနျြးနတေယျ...။ ?????????????????????????????????????????? အဲ့လိုပေါ့...။ မဖွဈနိုငျလောကျပါဘူးနျော...။ ကြှနျတျော အစိုးရိမျလှနျနတောဖွဈမှာပါနော....။
ကြှနျတေျာ့ ခဈြသူကောငျမလေးကလညျး အခုထိ သခှါးခငျးစောငျ့နသေေးတယျ...။ ကြှနျတေျာ့ကို တဈခုခုပွောခငျြတာမြား ရှိရငျ... ကှနျမနျ့ကနေ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောခဲ့ကွပါလားဗြာ...။
ကြှနျတေျာ့ စိတျထဲမှာ တဈခုခု ခုနသေလိုပဲ.....။
အပနျးပွေ ပြျောစရာ အဖွဈ အပငျြးပွသေဘောဖွငျ့ ရေးမိရေးရာ ရေးမိခွငျးပါ..။
မညျသညျ့စာမကျြတှငျ မဆို (Credit to ApannPyay) ဖွငျ့ ကူယူဖျောပွနိုငျပါသညျ..။